ပုရိသတို့ ရူးခါးသွားစေမယ့် နုပျိုဖွင့်ထွား ရေးဆေးငါးကြီး ဖြစ်စေဖို့ သုံးလပဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ
ပုရိသတို့ ရူးခါးသွားစေမယ့် နုပျိုဖွင့်ထွား ရေးဆေးငါးကြီး ဖြစ်စေဖို့ သုံးလပဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ မိန်းမသားတစ်ယောက်ဟာ မျက်နှာလေးတစ်ခုတည်း လှနေယုံဖြင့် မိမိချစ်သူကို မဆွဲဆောင်နိုင်ပါ။ မိန်းမသားတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရပ်၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်နဲ့ အချိုးအစားကျနနေဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အခုပြောမယ့် နည်းလမ်းကို ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့် သုံးလပဲ စိတ်ရှည်ရှည် ဇွဲရှိရှိနဲ့မှန်မှန်လေး လေ့ကျင့်နေထိုင်သွားပါ။ […]
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော်
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက်, ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက်!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး နာရီဝက်ပြုတ်!! ပြီးရင်အဖတ်တွေဆယ်ပီးပစ်လိုက်ပါ!! အရည်ကိုအအေးခံပီး အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာသောက်ပေးပါ!! တစ်နေ့3ကြိမ်ပေါ့!! […]
သွားကိုက်ဝေဒနာအတွက် တကယ်ထိရောက်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း သွားကိုက်ဝေဒနာဆိုရင် ယောက်ျားတွေတောင် ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ပါဘူး။ သွားကိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအပထား၊ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းရှာဖို့က အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မှီခိုအားထားကြပေမယ့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသိပ်များလွန်းတာက တကယ်တော့ ကိုယ်ခံအား ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိတဲ့ သဘာဝအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနည်းတွေကို ညွန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ […]
ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများနှင့် အတူဖမ်းမိထားသည့် အေအေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များအား မေ ၁၈ ရက်တွင် စွဲချက်အမိန့်ချမည်
ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများနှင့် အတူဖမ်းမိထားသည့် အေအေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များအား မေ ၁၈ ရက်တွင် စွဲချက်အမိန့်ချမည် မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နေအိမ်တစ်လုံး၌ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများနှင့် အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော အေအေ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား မန္တလေးခရိုင် တရားရုံးတွင် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေများဖြင့် တရားစွဲဆိုထားရာ မေ […]
လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပြီ…ရုပ်သံ
လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပြီ…ရုပ်သံ ကိုရိုနာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးကြတဲ့ ဖရဲ သခွား သရက် နဲ့ အခြားသောသီးနှံများ အပါအ၀င် ပြောင်းဖူးစိုက်တောင်သူတွေ အားလုံး ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ တရုတ်ဘက်မှာ အ၀င်မခံလို့ လမ်းမှာတင် သွန်ပြစ်နေကြရတဲ့ ဓာတ်ပုံ ဗွီယိုဖိုင်တွေမမြင်ချင်မှအဆုံး။ […]
တရားရုံး၏ ဒဏ်ငွေ ၅၀၀၀ အမိန်ချမှု့အပေါ် မကျေနပ်၍ ဒေးဒရဲမှ volunteer များအားလုံး နှုတ်ထွက်
တရားရုံး၏ ဒဏ်ငွေ ၅၀၀၀ အမိန်ချမှု့အပေါ် မကျေနပ်၍ ဒေးဒရဲမှ volunteer များအားလုံး နှုတ်ထွက် မြို့နယ်တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အပြီး ဒေးဒရဲမြို့အဝင် COVID-19 ကာကွယ်ရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ Volunteer လုပ်ကိုင်သူ အားလုံး နှုတ်ထွက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဒေးဒရဲမြို့အဝင်၌ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု […]